पार्टी एकता निल्नु न ओकल्नु -राजपाजस्तै अध्यक्ष मण्डल बनाउने ओलीको प्रस्ताव, अब प्रचण्ड के गर्छन ? – पुरा पढ्नुहोस्……
पार्टी एकता निल्नु न ओकल्नु -राजपाजस्तै अध्यक्ष मण्डल बनाउने ओलीको प्रस्ताव, अब प्रचण्ड के गर्छन ?
काठमाडौं, २१ माघ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डवीच आज पनि पार्टी एकता र सरकार गठनबारे वान टु वान भेटवार्ता भएको छ ।
ओलीले अध्यक्षबाहेक अन्य विकल्पमा जान सकिने अवधारणाबारे पनि प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए । ओली निकट उच्च स्रोतको दाबी छ,“प्रचण्डजीलाई विकल्प दिनेबारे उहाँले सोच्नुभएको छ ।” अध्यक्षबाहेक उनले आफूसहित बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रचण्डको अध्यक्ष मण्डल बनाउने पनि विकल्प सारेका छन् । तर प्रचण्ड उनको प्रस्तावबारे निर्णय गर्न नसकिने भन्दै पन्छिएका छन् ।
समाचार स्रोत :-रिपोर्टसनेपालबाट |
Prevकुन राशिको लागि भ्यालेन्टाइन डे कस्तो ? हेर्नुहोस तपाईहरुको राशिफल अनुसार यस्तो भ्यालेन्टाइन डे
Nextयस्तो रहेछ भुत घरको वास्तबिक्ता, स्थलगत रिपोर्टमा हेर्नुहोस (भिडियो)
आजको राशिफलः- बि.स. २०७५ साल मंसिर १३ गते बिहिबार इश्वी सन् २०१८ नोबेम्वर २९ तारीख, हेर्नुहोस आजको तपाँईको भाग्यफल!
गायिका पुर्णिमा लामाका दिदिबहिनि मिडियामा एकसाथ, यसरी गाए एक-अर्काको गीत (भिडियो सहित)
यो हेरेर कस्को मन नरोला र? अशोक दर्जी जस्तै गीत गाऊने बाल गायक विक्रमको घर पुग्दा जे देखियो – हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) शेयर गरौं।